(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/09/2021)
IYurophu likhubalo ethile zasebusika ngethuba leenyanga kubanda ukuba azifani nayiphi na indawo apha ehlabathini. Kukho ezininzi iintlobo, kwaye akukho neendawo ezimbini babe imvakalelo efanayo kunye nomoya. Inyaniso, Abantu abaninzi bathi ezidolophini nasezixekweni ngexesha leenyanga kubanda uzive ngathi uhambela indawo entsha. Ebusika uyakwazi fantastic ukuguqula Europe ngokupheleleyo, kwaye nabo, yenza amava amatsha kubakhenkethi angenakufumana naliphi na ixesha lonyaka. Nekhephu eziwa kuzisa ngayo emininzi imisebenzi ebusika kunye neeholide ezibalulekileyo ezenza zonke zehlobo kakhulu. Nangona yobuninzi utshintsho nobuhle, akunakwenzeka ukuba ukuhambela yonke. Ukuba uyafuna ukuhamba kwezinye iindawo zokuhamba edume, ndwendwela le 5 Iindawo ebusika eYurophu.
Ukuba ukhangela ubusika ukuba uya mangaza wena, koko jonga Akukho ngakumbi kwe Budapest. Yeyona isixeko ogqibeleleyo ngemoto ubusika. Esinye sezizathu eziphambili kukuba abaninzi bakhetha Budapest yinkqubo efikelelekayo. Ufumana ukuba idolophu elihle ngereyithi ezifikelelekayo. Budapest idla izele abakhenkethi ehlobo. kunjalo, ebusika, ubona ubuhle esi sixeko kunye nezihlwele engephi. Ngaphandle kwaloo nto, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
Venice, ukuze kube yinto yokuqala ukuza engqondweni xa ngqondweni nobusika European. kunjalo, ukuba baye kwisixeko zemijelo ebusika, uya kuyikhumbula ngonaphakade. Izitrato ezixineneyo kunye cafes ezinengxolo toned phantsi, uze ubone icala umzi ukuba ihlobo akakwazi ukubonisa. Yonke le umsindo befuna kwiinyanga zasehlotyeni ithathwa Zola kunye nomoya serene ukuba ngogqibeleleyo ukuze ehle ubusika. kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba isixeko siqalisa ebomini ngokukhawuleza kakhulu xa Venice Carnival imiqulu emhlabeni. wonke February, umzi ufumana kwakhula iindwendwe, kanye buso Beje ngomkhukula ezitratweni dolophu. izinxibo Creative kunye abadanisi ezitalatweni bazise imbali ezimibalabala esi sixeko ebomini. Ukuba ufuna yasebusika eliphilileyo ukuba awusoze uyilibale, wabeka eVenice kuluhlu lwakho.
IYurophu into wonke. Kukuwe ukuba ugqibe ukuba ubusika yakho Entle ebukeka ezifana nokusetyenziswa Gcina A Isitimela ukuba khona. Kuninzi okunokufunyanwa kwiinyanga zobusika, so get adventurous and take a bold step forward.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Winter zokufikela EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)